မျက်နှာအဆီပြန်လို့ စိတ်ညစ်နေရတဲ့ ပျိုမေတွေအတွက် နည်းလမ်းကောင်း - Pissaya News
နေအပူရိန် မြင့်နေတဲ့ ဒီလိုရာသီဥတုမျိုးမှာ မိတ်ကပ်လိမ်းပြီး အပြင်ထွက်ရတာလည်း မလွယ်ပါဘူးနော်။ ရာသီဥတုကပူ ချွေးထွက်၊ အဆီပြန် နေတဲ့ မျက်နှာမျိုးကိုတော့ ဘယ်သူမှမလိုချင်ကြပါဘူး။
အဲ့ဒါကြောင့် မျက်နှာအဆီပြန်ခြင်း ကို သက်သာစေမယ့် နည်းလမ်းလေးကို ပြန်လည်ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။ အခုဝေမျှပေးမယ့် နည်းလမ်းလေးအတိုင်း တစ်ပတ်မှာ တစ်ခါလောက်လိုက်လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ အဆီပြန်တာကို လုံးဝသက်သာစေမှာပါ။
ပါဝင်ပစ္စည်းတွေက. . . ပန်းသီး( ၁) ခြမ်း၊ သံပုရာရည် (စားပွဲဇွန်း၁ဇွန်း) အသုံးပြုပုံ. . . ပန်းသီးကို အခွံနွာ အစေ့ဖယ်ပြီး blenderထဲ ထည့်ကြိတ်ပါ။ သံပုရာရည်ကိုတော့ တခါတည်းထည့် ကြိတ်လဲ ရပါတယ်။ ရလာတဲ့အနှစ်ကို မျက်နှာပေါ်သုတ်လိမ်းလိုက်ပါ။ လိမ်ပြီးသွားရင်တော့ ၁၅မိနစ်လောက်ထားပြီး ရေဆေးချလိုက်ပါ။ အခုဝေမျှပေးခဲ့တဲ့ နည်းလမ်းလေးအတိုင်းကို လိုက်လုပ်ကြည့်ပါလို့ အကြံကောင်းလေးပေးပါရစေရှင်…
လူတိုင်းလိုလို ကြိုက်ကြတဲ့ လိမ္မော်သီး ရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် အသုံးဝင်ပုံလေးကို Pissaya News ပရိတ်သတ်တွေအတွက် ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။ တစ်နေ့တာမှာ လိမ္မော်သီးကို (၂) လုံးမှ (၄) လုံး...
.နေပူဒဏ်တွေကြောင့် နေလောင်နေတဲ့ ခြေထောက်လေးတွေကို ဖြူဝင်းစေဖို့ နည်းလမ်းကောင်း လေးကို ပြန်လည်ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။ ပါဝင်ပစ္စည်း . . . သကြားညို၊ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ၊ သံလွင်ဆီ ပထမဆုံးအနေနဲ့ ခြေထောက်ကို...
Pissaya ပရိတ်သတ်တွေအတွက် စတော်ဘယ်ရီသီးကနေရရှိနိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။ စတော်ဘယ်ရီသီးဟာ အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကို တားဆီးပေးနိုင်ပြီး မှတ်ဥာဏ်ကို ပိုမိုအားကောင်းစေတဲ့အပြင် ရောင်ရမ်းမှုတွေကိုလည်း သက်သာစေပါတယ်။ မျက်စိကျန်းမာရေးအတွက်လည်းကောင်းမွန်စေပါတယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်ကိုထိန်းညှိပေးတဲ့ အာနိသင်တွေလည်း စတော်ဘယ်ရီသီးမှာ...
ကိုယ့်ရဲ့ အသားအရေက ဘယ်လိုအသားအရေမျိုးလဲ